Football Khabar » रियल मड्रिडलाई ‘महासंकट’ : कोरोना र चोटले ८ खेलाडी थलिए !
रियल मड्रिडलाई ‘महासंकट’ : कोरोना र चोटले ८ खेलाडी थलिए !
स्पेनको क्लब रियल मड्रिड ठूलो संकटमा धकेलिएको छ । सिनियर टोलीका अधिकांश प्रमुख खेलाडी कोरोना भाइरसको संक्रमण र चोटले थलिँदा प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले कठिन दिनहरूको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । हालको ताजा अवस्थामा रियलका विभिन्न पोजिसनबाट खेल्ने कूल ८ जना खेलाडी खेल्न सक्ने स्थितिमा छैनन् ।
जसमा ३ जना खेलाडी कोरोनाबाट संक्रमित भएपछि होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् । अन्य ५ जना खेलाडी चोटग्रस्त बनेर कोही उपचारक्रममा छन् भने कोही फिट हुन संघर्षरत छन् । कूल मिलाएर रियलले आगामी केही खेल सिनियर टोलीका ८ जना खेलाडीबिनै खेल्नुपर्ने भएको छ ।
डिफेन्स लाइन पूरै प्रभावित
टोलीका कूल ८ जना खेलाडी कोरोना र चोटले टोलीबाहिर हुँदा रियललाई सबैभन्दा ठूलो तनाव भने रक्षापंक्तिको हुनेछ । किनभने, जिदानको पहिलो रोजाइका २ जना र वैकल्पिक २ जना गरी ४ जना प्रमुख डिफेन्डर अहिले खेल्ने स्थितिमा छैनन् । जसमा कप्तानसमेत रहेका रामोस, राफाएल भाराने, इडर मिलिटाओ र अल्भारो ओड्रिओजोला रहेका छन् । मिलिटाओ कोरोना संक्रमित छन् भने बाँकी ३ जना डिफेन्डर घाइते छन् । रामोस दुई दिनअघि मात्रै नेसन्स लिगमा जर्मनीविरुद्धको खेल दौरान घाइते भएका थिए ।
रियलको टोलीमा रामोस सधैं प्रमुख खेलाडी हुन् । उनी नहुँदा रियलको रक्षापंक्ति अक्सर फेल हुँदै आएको छ । रामोस उपलब्ध नहुने समयमै अर्का भरपर्दा डिफेन्डर भाराने पनि घाइते हुँदा जिदानको तनाव अझै बढेको छ । विकल्पमा पहिलो रोजाइमा पर्ने ओड्रिओजोला कोरोना संक्रमित र मिलिटाओ घाइते अवस्थामा रहेकाले यतिबेला रियलको डिफेन्स लाइन डामाडोल स्थितिमा छ । रियललाई यसको मूल्य आगामी खेलमा महँगो पर्न सक्नेछ ।
मिडफिल्ड र फ्रन्ट लाइनमा पनि तनाव
आगामी केही खेलमा रियललाई रक्षापंक्तिको मात्रै तनाव हुनेछैन, मिडफिल्ड र फ्रन्ट लाइनमा पनि उस्तै तनाव हुनेछ । पहिलो रोजाइका मिडफिल्डर कासेमिरो कोरोनाबाट संक्रमित छन् भने अर्का प्रभावशाली युवा मिडफिल्डर फेडे भाल्भर्डे घाइते छन् । जिदानको टोलीमा यी दुवै टोली प्रमुख खेलाडी हुन् ।
त्यसैगरी, फ्रन्ट लाइनमा रियललाई करिम बेन्जेमा र इडिन हाजार्डको पनि साथ हुनेछैन । बेन्जेमा घाइते छन् भने हाजार्ड कोरोनाबाट संक्रमित छन् । पछिल्लो समय मैदान फर्किएका हाजार्डले एक खेल खेलेलगत्तै उनको यात्रामा पुनः कोरोनाले तगारो हालेको हो । जिदानको सेटमा पहिलो रोजाइका फरवार्ड बेन्जेमा अझै दुई सातासम्म मैदानबाहिर हुनेछन् ।
आगामी खेल चुनौतीपूर्ण
टोलीका ८ जना खेलाडी उपलब्ध नभएका बेला रियलको अबको खेल तालिका चुनौतीपूर्ण छ । रियलले आगामी खेल शनिबार राति ला लिगामा भिल्लारियलसँग खेल्ने तालिका छ । हाल अंक तालिकामा रियल ८ खेलपछि मात्रै १६ अंक जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ । रियलले ला लिगामा पछिल्ला ५ मध्ये २ खेल हारेर ३ खेल जितेको छ । शनिबार अवे मैदानमा भिल्लारियलविरुद्ध हुने खेल रियलका लागि कठिन हुने पक्का छ ।
त्यसपछि रियलले आगामी बुधबार च्याम्पियन्स लिगमा समूह चरणको चौथो खेल अवे मैदानमा इटालियन क्लब इन्टर मिलानसँग खेल्नेछ । हाल मात्रै ४ अंक बनाएर तेस्रो स्थानमा रहेको रियलका लागि मिलानविरुद्धको जित जरुरी छ । यदि सो खेल जित्न नसके रियल समूह चरणबाटै बाहिरने खतरा थप बढेर जानेछ ।
मिलानसँगको खेलपछि रियलले अर्को खेल अर्को साता आफ्नो घरमा ला लिगामा अलाभेससँग खेल्नेछ । त्यसपछि अर्को खेल च्याम्पियन्स लिगमै शाख्तर डोनेट्स्कसँग अव मैदानमा खेल्नेछ । त्यसपछिको खेल ला लिगामा सेभिल्लासँग हुनेछ ।
प्रकाशित मिति ४ मंसिर २०७७, बिहीबार १३:४४